Ihlaya le-SEO: I-Backlinking Comic evela ku-Dilbert
NgoLwesihlanu, ngoJuni 24, i-2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Umngane omuhle, UShawn Schwegman, uthumele le khathuni kaDilbert ngaphezulu:
Ingxoxo eyalandela yayifanele ukuphinda futhi:
Lapho uDilbert eqala ukuqhulula amahlaya mayelana nokwakhiwa kwe-link uyazi ukuthi uGoogle unenkinga (futhi i-SEO isihambile) ”kwengeza isazi sendawo sosesho Andrew Shotland.
Kuyiphuzu elihle. Wonke amabhizinisi abheke ukwakha ubukhona bawo bokusesha ayaqaphela ukuthi baphila futhi bafa ngokuxhumanisa okwenziwe ngendlela efanele emuva. Izinsizakalo ze-Crappy backlinking zikhona yonke indawo futhi zizobeka isu lakho lonke le-injini yokusesha engcupheni ngezixhumanisi ezingasebenzi ezibekwe kokuthunyelwe okuzenzakalelayo, okuthunyelwe ngomshini kumasayithi avulekele ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, i-porn ne-viagra. Kugweme njengobhadane futhi ungalingwa yinzuzo yesikhashana. Ngokuhamba kwesikhathi, i-Google izoqhubeka nokudalula lokhu futhi isimo esihle kakhulu ukuthi izixhumanisi azinakwa futhi ulahlekelwe yimali yakho. Okubi kakhulu ukuthi ungcwatshwe enkombeni futhi kuthatha izinyanga noma iminyaka ukuthola amandla kabusha.
Uma ufuna ngempela ama-backlinks, kwenze ngokubhala okuqukethwe okuhle, usabalalise lokho okuqukethwe ngokusebenzisa izindlela zokuxhumana nabantu kanye namavidiyo, uthuthukise i-Infographics, ibhulogi yezivakashi, futhi usebenzise inkampani enkulu yokukhishwa kwabezindaba ezokuveza obala emibhalweni egunyaziwe yezimboni.
Amabhizinisi Amancane Nemidiya Yezenhlalo